Iindaba ezi-5 zokuhlela ngoFebruwari zabokuqala ukwenza into kunye nabantu abangcwalisiweyo | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi zoLutsha, Inoveli, Inoveli emnyama, Inoveli yothando
Inyanga yokuqala yonyaka iphela kwaye ndiyazisa 5 Iindaba zokuhlela ngoFebruwari. Zivela kubabhali abazinzileyo, njenge USarah Lark okanye uRobert Bryndza, kunye nabokuqala njenge UKerry Maniscalco. Isihloko sesibini se UAna Ballabriga kunye noDavid Zaplana, isibini esenze kakuhle kakhulu. Kwaye ndiqaqambisa ngakumbi ukumiliselwa, emva kokulinda ixesha elide, yenoveli yokuqala endisebenza nayo kunye nomhleli endisebenza naye kule bhlog, UAna Lena Rivera, epapasha isihloko sayo esiphumeleleyo Ibhaso leTorrente Ballester 2017.
1 Intwana yayo yonke into
2 Ukuzingela uJack Ripper - Kerri Maniscalco
3 Unyaka weeDolphins - uSarah Lark
4 Yintoni abafileyo bathe cwaka - Ana Lena Rivera
5 NdinguRose Black - uAna Ballabriga kunye noDavid Zaplana
6 Amanzi amnyama -Robert Bryndza
Intwana yayo yonke into
Zizinto ezintsha zoncwadi ulutsha, uthando kunye nomnyama. Kuyamangalisa ukuba, Lilonke, kukho ophambili ngohlobo lomphandi okwishumi elivisayo wenkulungwane yeshumi elinethoba, umntu ozimiselayo oqhuba iphupha lakhe lokuba sisayensi yezaselwandle, kunye nabacuphi abathathu abalinganiswa abohluke kakhulu. Masibone.
Ukuzingela uJack Ripper -Kerri Maniscalco
Ityala lombhali waseNyakatho Melika uKerri Maniscalco ngale noveli ngu Imfihlakalo kunye nokothuka kubekwe eVictorian London. Ngempumelelo enkulu kwaye ube # 1 othengisa kakhulu kuluhlu lwe ENew York Times, kulindeleke ulwamkelo oluhle apha.
U-Audrey Rose Wadsworth oneminyaka elishumi elinesixhenxe uyintombi ka inkosi kwaye ikhokelela kubomi bobutyebi nelungelo. Kodwa phakathi kwamatheko eti kunye nelokhwe yesilika naye unobomi obuyimfihlo obungavumelekanga. Kwaye uchwechwa ngaphandle rhoqo ukufundela amayeza kwelebhu kamalume wakhe. Le nto ndiyithandayo iya kumsa kuyo phanda ukubulala okungummangaliso.
Le yeyona nto ukuqala kwesaga Oko kuyakulandela amatyala amatsha aphandwa ngumlinganiswa ophambili onxulumene nobumnyama kunye namandla angaphezu kwendalo.
Unyaka wamahlengesi -USarah Lark
Inoveli entsha yombhali ophumeleleyo we kwiLizwe eliMhlophe leLifu. Ngeli xesha usicebisa ukuba silandele amanyathelo laura, umama osemncinci, ofuna ukufezekisa iphupha lakhe yiba biologist yaselwandle. Ngenxa yoko, akathandabuzi ukusuka eJamani ukuya kwilizwe elinelifu elimhlophe ukuze asebenze njengesikhokelo kwinkampani yabakhenkethi ekhethekileyo kwezokhenketho ukuze babone iminenga kunye namahlengesi.
U-Ana Lena Rivera, u-Asturian ngokuzalwa kunye neMadrid ngokwamkelwa, waphumelela Ibhaso leTorrente Ballester kwi2017 ngale noveli ibona ukukhanya ekuqaleni kukaFebruwari. Iinkwenkwezi UGrace Saint Sebastian, igama elitsha ngokuqinisekileyo eliya kuthathelwa ingqalelo kwi iliza labaphandi ababhinqileyo abalungileyo yomboniso wangoku wokubhala.
San Sebastián Uphanda ityala likaDon Marcelo Pravia, Indoda endala eneminyaka elikhulu elinashumi-emibini ubudala, owayesakuba ngumkhosi waseFranco, ofumana ipenshoni. UDon Marcelo akakhange anyangwe ngugqirha kule minyaka ingamashumi amathathu idlulileyo kwaye kule minyaka idlulileyo utshintshele kwibhanki ye-intanethi. Ke yonke into yalatha kumntu onxibe loo minyaka imashumi mathathu Ukufumana ipenshini yabo ngendlela engafanelekanga kwaye bayayazi indlela yokufihla kuhle.
Ngexesha lophando kuyenzeka ukuba ummelwane kamama kaGracia uzijula ​​eyadini ngefestile yekhitshi lakhe kumgangatho wesithandathu. Kwaye inqaku liphawulwe kwisondo lakhe, elibhekiswe kumgcini-mlindi.
UGrace naye ubuyele kowabo kunxweme loLwandle lwaseCantabrian, ebaleka ubomi bakhe bakudala njengesigqeba sezemali eNew York nase emva kokubhubha kukaMartin, unyana wakhe oneminyaka emithathu ubudala. Kwaye iya kusongwa ngefayile ye- Imbali yosapho enomdla egcwele iimfihlelo.
Ndimnyama ndimnyama -Ana Ballabriga kunye noDavid Zaplana
Ekuqaleni kukaFebruwari inoveli entsha yesi sibini saseCagagagena nayo iyathengiswa. iphumelele ukhuphiswano lweeNcwadi lwaBabhali abazimeleyo NgeSpanish Amazon nge Akukho scottish eyinyani. Ngoku basungula isihloko esitsha esidibanisa imfihlakalo, uburharha nothando, kwaye banomcuphi wabucala njengomntu ophambili. Le yincwadi yokuqala kuthotho abanethemba lokuba abafundi baya kuyithanda.
URose Mnyama inayo yonke into ocinga ukuba ungayifuna: umsebenzi ozinzileyo, ohlawula kakuhle njenge igqwetha kwifemu yomthetho eIbiza, a umhlobo wase-Italiya inkulu kwaye Abahlobo abathathu abangenamiqathango kwaye iyahlekisa. Nangona kunjalo, xa egqiba i-40, uyaqonda ukuba ubomi bakhe bubonakala bufikelele encotsheni.
Ngomso olandelayo umthengi osisityebi okrokrela ukuba umyeni wakhe uyamqhatha yiya kwifemu yakhe. URose, owayecinga ngokuba ngumphandi okoko isoka lakhe uAlex lanyamalala ngokumangalisayo eneminyaka engama-20, Ugqiba kwelokuba aqale olwakhe uphando. Kodwa andazi ukuba yintoni ityala liya kuba yingozi ngakumbi Malunga nento endiyicingileyo. Nangona kunjalo, uya kuba noncedo lwe I-hustler ehlekisayo evela eMurcia, eqhele ngakumbi kunamaqhinga nasitalatweni.
Kwangelo xesha uRose uzakudibana nepolisa ophethe uphando lokunyamalala kuka-Alex: UMarc Lobo. Indoda emenza angonwabi kwaye imtsale ngokulinganayo.
Amanzi amnyama -Robert Bryndza
Kwaye ekugqibeleni sinayo incwadi yesithathu Ukusuka kuthotho lweenkwenkwezi olunomcuphi UErika foster, Umbhali othengisa kakhulu isiNgesi no Ndizokubona phantsi komkhenkce y Isithunzi ebumnyameni.
Ngeli xesha uMcuphi u-Erika Foster ufumana icebo lokuba isitshixo sokusombulula ityala elibalulekileyo yeziyobisi zifihlwe kwifayile ye- inkwali elahliweyo ngaphandle kweLondon, ke uyalela ukuba akhangelwe. Apho, phakathi kodaka olungqingqwa, bafumana i Ukungqinelana neziyobisi, kodwa nento ebonakala ngathi amathambo enkwenkwana.
Iintsalela zichongiwe njengezo ze UJessica Collins, oneminyaka esixhenxe, intombazana elahlekileyo eyenza zonke izihloko seminyaka engamashumi amabini anesithandathu eyadlulayo. Njengoko uErika ezama ukudibanisa ubungqina obudala kunye nobudala, naye ubuza malunga nosapho lakwaCollins elidlulileyo kwaye unxibelelana nomphenyi ophambili wetyala ngelo xesha, uAmanda Baker, umfazi owangcungcuthekiswa kukusilela kokungayifumani intombazana ngelo xesha. Kodwa kukho umntu ogcina iimfihlo ezoyikekayo, akafuni ukuba ityala lisonjululwe Kwaye uya kwenza konke okusemandleni ukukhusela uErika ekufumaneni inyani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iindaba ezi-5 zokuhlela ngoFebruwari kwabokuqala kunye nokumiselwa